UCTU sy FMA : Lasa MAFIA -
AccueilSongandinaUCTU sy FMA : Lasa MAFIA
UCTU sy FMA : Lasa MAFIA
Efa mihoatra ny fefy ny paikady entin’ireto mpitatitra hanerena ny fanjakana hanome izay tadiavin’izy ireo. Mandrahona ny hampakatra ny saran-dalana ho 700 Ariary, hialoavana fampitsaharana ny asa fitaterana ny fivondronan’ireo kaoperativa manao ny asa fitaterana an-drenivohitra (UCTU). Tsy nahitana marimaritra iraisana mantsy ny fihaonan’izy ireo tamin’ny minisitry ny Angovo omaly hariva, momba ny fampidinana ny vidin-tsolika raha ny nambaran’ny filohan’ny UCTU, sady filohan’ny Federasionin’ny mpitatitra Lova Randrianatoandro. Tsy nifanaraka tamin’izay noeritreretin’izy ireo ihany koa ny fanampiana nomen’ny Fanjakana raha ny nambaran’ity Filohany ity. Ny fanampiana volana aogositra 2017 ihany mantsy no azon’izy ireo raha toa ka ny fanampiana tao anatin’ny 5 volana no nantenaina. Izany hoe 240 000 Ariary ihany no nomen’ny fanjakana, raha toa ny avo dimy henin’io tarehimarika io no nantenain’ireto mpitatitra ireto. Anisan’ireo hanao ny fampakarana ihany koa ireo Koperativa mivondrona ao anatin’ny Fitaterana mendrika an’Antananarivo (FMA). Ity farany izay efa nanao amboletra nampakatra ny saran-dalana ho 500 Ariary nanomboka tamin’ny fiandohan’ity volana ity.
Tsy misy hafa amin’ny fomba fanaon’ireo Mafia any ivelany ireny mihitsy izao fihetsika ataon’ireo mpitatitra izao. Mandrahona sy mampihorohoro ny mpitondra sy ireo tompon’andraikitra ahazoana izay tadiavina. Mahafantatra tsara mantsy ireo mpitatitra ireto fa zava-dehibe eo amin’ny fiainan’ny vahoaka malagasy amin’ny fiatrehana ny fiainana andavanandro ny sehatry ny fitaterana. Atao fairano araka izany ny vahoaka ahatonga azy ireo hanery ny mpitondra hanome izay tadiavin’izy ireo. Atao ihany koa izay handemena ny saim-bahoaka ahatonga azy ireo tsy afaka hieritreritra intsony fa ataon’ireo mpandraharaha eo amin’ny sehatry ny fitaterana fitaovana anie izy ireo. Na ireo samy mpitatitra aza dia mifanenjika sy miady an-trano rehefa misy mpandraharaha sasany mahatsapa ny fahasahiranam-bahoaka, ka manao ny asany na mitokona aza ireo mpitatitra hafa. Nosakanana sy nampihorohoroana ho dorana ohatra ireo zotra nanatanteraka ny asany nandritra ny fitokonana nataon’ireo mpitatitra tao anatin’ny UCTU.